मोबाइल हराउँदा एक मिनेटमै कसरी पत्ता लगाउने ! थाहा पाईराख्नुहोस्
January 24, 2021 1078
अचेल सबैको हात–हातमा स्मा’र्ट फोन हुन्छ । स्मार्ट फोन बोक्नेहरुले आफ्नो मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा भे’टाउन सकिने प्रब:ल सम्भावना रहन्छ । यसका लागि तपाई मोबाइल कि’न्नासाथ अर्थात हराउनुभन्दा अगावै आफ्नो मोबा’इलमा भएको केही फङ्सनहरुको सेटिङ भने अवश्य मिलाउनुपर्छ ।
केही से’टिङ मिलाएर तपाईं आफ्नो हराएको वा चोरी भएको स्मार्ट फोनको लोके’सन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ । एन्ड्रोइड मोबाइलमा एक बिल्ट इन ट्र्याकिङ फिचर हुन्छ । यसलाई प्रयोग गरेर मोबाइ’लको लोकेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
जसका लागि तपाईले मोबा’इलमा आफूले ए’क्टिभेट गरको गुगल एकाउन्ट खोल्नुस् । त्यसपछि यो लिंकमा google.com/android/devicemanager गएर हेर्नुस् ।
तपाईले जुन गुगल एका’उन्ट लगइन गर्नुहुन्छ, त्यो एकाउ’न्टसँग जोडिएका सबै एन्ड्रोइड डिभा’इसको लोकेसन गुगल म्यापको सहा’यताले सहजै पत्ता लाग्छ । यसबाट तपाईंले आफ्नो फो’नमा घन्टी बजा’उन पनि सक्नुहुन्छ । एउटा यस्तो अप्सन छ, जसबाट तपाईं आफ्नो फोनमा भएको सबै डाटा मेटा:उन सक्नुहुन्छ । र, मोबा’इल लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसको विक’ल्पमा एबीजी, अवास्ट, क्यास्प’रस्काई, लुकआउट लगाय’तका एप्लिके’शनको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी एप्समा पनि रिमोट ट्र्या’किङ र डि’भाइस लक तथा डाटा इरेजको सुविधा हुन्छ ।
आइफोनका लागि बिल्ट–इन एन्टी’थेफ्ट एपको सुविधा हुन्छ । यो एपको नाम फा’इन्ड माई फोन हो । यसले तपाईंको आइक्ला’उड एकाउन्टको माध्य’मबाट काम गर्छ । खबर हब बाट साभार
Prev१२ दिन मात्रै छ, मलाई बचाई दिनुस्, भन्दै सहयोगका लागि मंसिरको अपील (भिडियो सहित)
Nextकम्पनीले बोनस बाँडेपछि कर्मचारी बोरामा पैसा बोकेर घर फर्किए !
हेर्दाहेर्दै आँखै अगाडी ढलिन्, अचम्म मान्दै रमिते बने गाउँले (भिडियो सहित)